Ny App Store dia mandà fampiharana maherin'ny 40.000 isan-kerinandro | Vaovao IPhone
Ignacio Sala | 07/04/2021 22:00 | Fampiharana iPhone, App store
Tao anatin'izay volana vitsy lasa izay, betsaka ny voalaza momba ny mety hanerena ilay orinasa tantanin'i Tim Cook sokafy ny varavaran'ny fivarotana fampiharana hafa. Andro vitsivitsy lasa izay dia nitsidika ny podcast i Tim Cook hifehy avy amin'ny New York Times, izay nanontaniana azy momba ity olana ity.
Tim Cook dia nanambara fa isan-kerinandro dia mahazo ny App Store maherin'ny 100.000 ny fangatahana hojerena. Na izany aza, latsaky ny antsasaky ny 40.000 no lavina. Ny anton'ny fandavana azy dia satria na tsy mandeha izy ireo na tsy miasa araka ny nambaran'ny developer azy.
Amin'ny herinandro voatondro, fampiharana 100.000 40.000 no miditra amin'ny tsikera fampiharana. XNUMX XNUMX amin'izy ireo no lavina. Nolavina ny ankamaroany satria tsy miasa izy ireo na tsy miasa amin'ny fomba nolazainy hoe miasa. Azonao an-tsaina raha nanjavona ilay fanasitranana, izay hitranga amin'ny App Store amin'ny fotoana fohy.
Kara Swisher, mpampiantrano ny podcast, dia nanontany an'i Cook maninona no tsy misy fivarotana fampiharana voatantana avy amin'ny orinasa na fikambanana hafa. Mazava ny valintenin'i Cook: Apple dia namorona ny tontolo iainana ary mendrika ny handray soa amin'izany.
Apple dia nanampy tamin'ny fananganana toekarena mihoatra ny antsasaky ny trillion dolara isan-taona, antsasaky ny trillion, ary mandray anjara kely dia kely amin'ny fanavaozana noforoniny sy amin'ny fandaniana amin'ny fitantanana ilay magazay.
Naneho hevitra ihany koa izy ny tapaka ao amin'ny kaomisiona izay paosin'i Apple, dia nitentina 30% ka hatramin'ny 15% teo amin'ireo mpampivelatra izay mitentina latsaky ny $ 1 tapitrisa isan-taona:
Toy ny 85% ny olona mandoa kaomisiona aotra. Ary avy eo amin'ny fivezivezentsika farany miaraka amin'ireo mpamorona kely, ny mpandraharaha izay mahazo vola latsaky ny iray tapitrisa dolara isan-taona dia mandoa 15%. Raha ny fandehany dia izany no ankamaroan'ny mpamorona.
Cook dia nilaza fa tsy mankasitraka ny famelana ny mpampiasa hametraka fampiharana mivantana izy, toy ny ho tapaka ny maodely tsiambaratelo sy fiarovana noforonin'i Apple miaraka amin'ny iOS izy na dia milaza aza fa misokatra ny App Store hiova, fa tsy vita amin'ny simenitra izy io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Mandà fampiharana maherin'ny 40.000 isan-kerinandro ny App Store